Talantalana hazo izay miaraka amin'ny efitrano rehetra ao an-tranonay | Bezzia
Susana godoy | 02/06/2021 16:00 | Decor
Rehefa mieritreritra haingon-trano isika dia mazava izany talantalana hazo Iray amin'ireo safidy tsy tokony holalovantsika ireo. Tena ilaina izy ireo ary tsy ho an'ny efitrano iray ao an-trano ihany fa ho an'ny maro. Tianay ho toy ny antsipirian'ny haingon-trano io, fa koa fitahirizam-bola.
Noho izany, hisy hatrany izay mifanaraka amin'ny filantsika fa koa amin'ny efitrano tsirairay. Noho izany, averinay jerena ireo rehetra izay hahatonga antsika tsy ho maika ary amin'ny fotoana iray ihany dia handrakotra ny zoro rehetra. Te hahafantatra ny fomba haingo miaraka amin'izy ireo ny efitranonao tsirairay?
1 Talantalana hazo avo handravahana ny efitrano fandraisam-bahiny
2 Talantalana hazo ho an'ny birao na birao
3 Kianja ambany ho an'ny efitranon'ny ankizy
4 Talantalana tonga lafatra ho an'ny efitrano fandriana
5 Fialofana tsy misy mpizara habakabaka ambany
Talantalana hazo avo handravahana ny efitrano fandraisam-bahiny
Angamba ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny no tadiavintsika ny fomba talantalana tery sy tery no mitana faritra midadasika. Marina fa amin'ny lafiny iray, hahafahana mametraka ireo boky, afaka miloka amin'ny tilikambo avo sy tery foana ianao. Saingy fantatsika ihany koa fa ny famoronana modular dia iray amin'ireo hevitra lehibe. Ity dia ny ahafahantsika mametraka ireo talantalana maromaro ireo, mifanila iray hafa. Ka hamorona firafitra lehibe isika raha izany no tsirintsika ary raha mamela azy io ny habaka. Fa na izany aza, eny fa any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia miloka kokoa amin'ireo talantalana ireo ho toy ny tilikambo izy ireo.
Talantalana hazo ho an'ny birao na birao
Marina fa tsy misy fomba manokana handravahana, satria mety tsy manam-petra izy ireo satria misy tsiro. Saingy amin'ny birao na efitrano fianarana dia afaka miloka amin'ny talantalana isika. Amin'izao fomba izao, Hametraka ireo boky na fisie ihany koa izahay ary hangonina kokoa izy ireo satria eo amin'ny rindrina no misy azy ireo. Miaraka amin'izy ireo isika dia hamonjy toerana be dia be, satria ny manararaotra ny rindrina dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra ananantsika.
Afaka misafidy koa isika eo akaikin'ny talantalana ny talantalana toradroa izay azo atambatra manaraka ny rindrina amin'ny fomba asymmetrika. Noho izany, hamorona vokatra tany am-boalohany isika amin'ny haingon-trano. Ny zavatra tsara momba ny talantalana hazo sy ny endrik'izy ireo dia ny ahafahantsika manambatra azy ireo araka ny itiavantsika azy ary mandoko azy ireo aza raha hitanao fa ilaina izany. Satria ny loko koa dia iray amin'ireo antsipirian'ny haingon-trano izay ilaintsika mandrakariva.
Kianja ambany ho an'ny efitranon'ny ankizy
Ho an'ny efitranon'ny kely indrindra amin'ny trano dia mila ihany koa isika andian-talantalana izay manampy anay hitahiry ny kilalao sy ny boky rehetra. Noho izany, tsy misy toa ny filokana ihany koa amin'ny kianja. Ireo dia azo jerena amin'ny loko isan-karazany ary ho tonga lafatra mihoatra ny tonga lafatra izy ireo hankafy tontolo feno fiainana sy falifaly kokoa amin'ny ankapobeny. Ho fanampin'ireo modely rehetra mety ho hitantsika dia tsy maintsy lazaina fa mila hazo mahazaka isika, satria efa fantatsika fa tsy mila lozam-pifamoivoizana tsy ilaina isika.
Talantalana tonga lafatra ho an'ny efitrano fandriana
Ny iray amin'ireo faritra lehibe dia ny efitrano fandriana. Noho izany, mila azy ireo izahay hamaly ny filan'ity faritra ity ary ambonin'izany rehetra izany, izy ireo dia hifantoka amin'ny ampahany amin'ny solaitrabe. Ka eto isika dia afaka mahita talantalana sasany izay mitahiry ny ilaina amin'ny famantaranandro fanairana, boky ary zavatra haingon-trano hafa. Fa marina ihany koa fa afaka misafidy talantalana mijoro sy modular ianao, miankina foana amin'ny toerana anananao. Hevitra tsara ny hoe afaka manome azy io hamoronana zavatra eo am-piezahana hitazona izay rehetra ilainao ao aminy. Raha tsy manana toerana malalaka ianao dia efa fantatrao fa ny rindrina dia mbola namanay akaiky indrindra.
Fialofana tsy misy mpizara habakabaka ambany
Rehefa te-hamily toerana isika dia tsotra be izany. Azontsika atao ny miloka amin'ny hevitra toy izao izay mifototra amin'ny fankafizana talantalana tsy misy ambany, izany hoe misokatra ary mametraka azy io saraho ny efitra fandraisam-bahiny sy ny efitrano fisakafoana ary ny fidirana. Hevitra mamorona izay ho tonga lafatra afaka miditra ao amin'ireo fomba haingo rehetra ao an-tsainao. Tianao talantalana hazo ve ianao? Aiza no hametrahanao azy ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Talantalana vita amin'ny hazo izay mifanaraka amin'ny efitrano rehetra ao an-tranonao